လိုးကားဂိမ္း:တြန္း XXX စုံလင်
ကြည့်ရှုပါ:ကျွန်တော်တို့သွားမယ့်ဟန်တစ်စက္ကန့်အဘို့အကြောင်းကျနော်တို့အချို့သောအမြင့်ဆုံးအဆင့်၊အထက်တန်းအဆင့်နေရာသင်တို့အဘို့ကစားရန်ဂိမ်းအထက္ဘုတ်နှင့်အလွန်အမင်းပရော်ဖက်ရှင်နယ်သာ။ အကြောင်းရင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်မြှုပ်နှံဖို့ဖန်တီးလိုးခေါင်းစဉ်–အရာတစ်ခုခုအကြောင်းကိုလူအများကြီးစဉ်းစားလိမ့်မည်ဟုလုံးဝအရူး။ အို၊ကျွန်တော်သင်ယူယင်းအစားအစောပိုင်းသည့်အခါအပေါ်ထုတ်ဝေကျွန်တော်တို့ရဲ့တြန္းညမ်းခေါင်းစဉ်မှကမ္ဘာကိုအမှန်တကယ်၊အများကြီးတစ်ငရဲ၏ဝယ်လိုအားအတွက်ရရှိနိုင်ဤအာကာသ၊နှင့်အကြှနျုပျတို့သညျဖို့မျှော်လင့် gobbling လုံး၏မိတ်ဆွေထွက်ရှိချင်သောကစားအချို့အမှန်တကယ်လိင်နှင့်ကာမဂုဏ်၊ကားျ။, ဒါကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်အဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်ကနေအရမ်းအစမှာကျွန်တော်တို့မှာပါဝင်ပတ်သက်နေ၏ထုတ်လုပ်မှုညမ်းခေါင်းစဉ်–လိုးဂိမ်းများဖြစ်ကြောင်းအလုပ်သင်ပည္ဆိုင္ရာ! အရာတစ်ခုခုမယ်လျှင်သင်ကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်အဖြစ်ကောင်းကောင်းတစ်စိတ်ကူးသင်တို့အဘို့အမှထွက်ခွာရန်ချက်ချင်းမရလျှင်ကော။ ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားအားပေးနိုင်လိမ့်မှသင်လက်လှမ်း rawest၏အတွေ့အကြုံနှင့်အမှန်တကယ်ယုံကြည်ကြောင်းအင်တာနက်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေရာအချက်ကိုအပ်ပေးပြီသောငါတို့သည်တည်ရှိနေ။ Anyhow–ဘယ်လိုအကြောင်းငါကိုစူးစမ်းသည်အဘယ်အရာကိုစေသည်လိုးကားဂိမ်းများဒါမင်းကြီးနှင့်အသင်သည်ကိုယ်အဘို့ဆုံးဖြတ်ဒါကြောင့်တစ်ခုခုရဲ့အကယ်သင်လိုချင်တာအဖြစ်တစ်ဦး၏အစိတ်အပိုင်း?, အသံတူအစီအစဉ်သင်သည်ငါ့ကိုတောင်းလျှင်!
မပဲဖန်တီးဖို့မည်သည့်အရွယ်ညမ်းဒီ:အဆိုပါအာရုံစိုက်ခံရဖို့ရှိပါတယ်ဖက်ရှင်အတွက်။ ဒီကိုဆိုလိုသည်ကြောင်းဆွဲမိုးသည်းထန်စွာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကနေဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ပင်အသုံးပြုရန်အသံမင်းသမီးတိုကျိုကနေကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုသေချာစေရန်သူတို့အဖြစ်နဲ့ပျော်စရာအဖြစ်တတ်နိုင်သမျှ။ ၉ လက်ရှိအဖွဲ့ဝင်များအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့၊၅ ခုနှစ်တွင်ဂျပန်–တစ်ဦးတော်တော်လေးကောင်းသောအချိုးအစားဖြစ်သင့်သောသေချာစေရန်အလိုးဂိမ်းကစားအတွေ့အကြုံသင်ပေးနောက်အဆင့်အစည်းအဝေးများ။, ပါကကျေးဇူးပြုပြီးလက်ရှိအခြေအနေ ၂၂ ဂိမ်း၊အရာများကဲ့သို့ထင်ရစေခြင်းငှါအနိမ့်အရေအတွက်၊ဒါပေမယ့်အသီးအသီးတဦးသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပတ်ပတ်လည် ၅ သို့ ၁၀ နာရီအရှည်ချင်လျှင်၊ကဖြည့်စွက်။ မင့်အပါအဝင်အားလုံးစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ဘေးထွက်ဆိုးဖှေနှင့်–ကောင်းပြီ–wanking အချိန်! မရိုက်ပုတ်ချုံပတ်လည်မှာဒီမှာပါ:ဆုံးဖြတ်လျှင်အတက်လက်မှတ်ထိုးရန်အလိုးကားဂိမ္း၊အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်တာပေါ့ရှုပ်များချွတ်ရန်သည်အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုကိုဖို့ရှိသည်။ မှားယွင်းနေတာဘာမှမရှိဘူးရဲ့၊နှင့်ကျွန်တော်ပေးကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်္ဂလာနှင့်အတူသင့်ရဲ့အလိုဆန္ဒ။, ငရဲ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းတက်မြေပြင်ကနေဒီဇိုင်းပြုလုပ်သင်ကူညီနှင့်အတူ fapping၊ဒါကြောင့်ဖွင့်အဘယျသို့နှင့်အတူပြဿနာကိုကိုယ့်ပွင့်လင်းဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုအားလုံးနှင့်ဝန်ခံသောတိရစ္ဆာန်အလိင်ဂိမ်းများအထူးဒီမှာအလုပ်သင်ပည္ဆိုင္ရာ!
ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမှန်တကယ်ရိုက်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းင္သည္လိုးကားအနုပညာလက်စတိုင်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းမှာလျင်မြန်တဲ့အကြည့်ခရီးစဉ်ရဲ့ကုိယ္တုိင္လာေကြောင်းအရာကဒီမှာဖြစ်သင့်သရုပ်ပြ၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုမှကြွလာသောအခါထုတ်ဝြေဤအမျိုးအစားအလုပ်လုပ်။ ကျွန်တော်မယုံနိုင်လောက်အောင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်ရတဲ့ဂိမ်းကြည့်ဖို့ကဲ့သို့စိတ်ကူးဖြစ်နိုင်၊ဒါကြောင့်ခပ်သိမ်းသောအနုပညာရှင်ကျွန်တော်တို့ငှားရမ်းခဲ့တဲ့သမိုင်းနှင့်အတူအရွယ်ရောက်သူတြန္းအာရုံစိုက်။ လိုးေဓာတုပစ္စည်းနှင့်ကျွှန်တော်ဆက်လက်အောင်ဂိမ်းအတွက်ဒီအတိုင်းအ punters ထွက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်ရှိသည်မှကယ်နှုတ်တော်မူ၏။, စိတ်ချပါငြိမ်ဝပ်စွာနေစဉ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းစိတ်ကူးကြည့်ရှု၊သူတို့အဖို့ဖြစ်နိုင်မှအပြေးတွင်စာသားအတိုင်းမည်သည့်စက်။ တစ်ခုမှာအကျိုးခံစားခွင့်မှကြွလာသောအခါလိုးကားအနုပညာနှင့်ဗီဒီယိုအကြောင်းအချက်အနိမ့် framerates–နှင့်အတော်လေးအနည်းငယ်ႈ–ဝိေ၏ကောင်းသောအမှု၊ဆန့်ကျင်အဖြစ် shoddy ထုတ္လုပ္သ။ အဆုံးရလဒ်ကတော့လက်တွေ့မည်သည့်စက်ပျော်မွေ့နိုင်လိုးကား။ ကျွန်မတို့ဟာလူအတူချိတ်ဆက်ထားသောအာလူးမီနှင့်ပြီးမှအဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ကပြောသည်ခဲ့တာ၊သူတို့အဖို့လုံလောက်တဲ့ထက်ပိုခဲ့ကြကိုင်တွယ်္နှင့် GPU ဝန်ကျနော်တို့လိုအပ်သည်ရရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂိမ်းပြေးမှာပုံမှန်အရှိန်အဟုန်–တော်တော်ချိုမြိန်၊အယ်?
လက်ရှိအဆင့်အတန်းလိုးကားဂိမ်းကောင်းတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်သည်:ကျနော်တို့အလုံအလောက်ဂိမ်းဒီနေရာမှာသင်ဖျော်ဖြေမှုကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ကအျဖင့္နာရီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခမဲ့ဗီဒီယိုရပ်လိုးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်သင့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပလက်ဖောင်းသင်ဆိုရင် speedrunner သူရဲ့စူးစမ်းနဲ့အကုန်လုံးကိုဂိမ်းအကြောင်းငါတို့သည်ပူဇော်ဖို့ရှိသည်။ ကပြောသည်ဘဲလျက်၊ကျနော်တို့အစဉ်အမြဲရှာဖွေနေများအတွက်တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်နည်းလမ်းများနှင့်အချက်ကိုအပ်ပေးကြောင်းဆက်ပြောသည်တစ်ဖက်ဆာဗာကဖွင့်ပြောခဲ့တဲ့ကျနော်တို့အနေဖြင့်အမြဲရှာဖွေစူးစမ်းကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်မှုများဖွင့်လိုးကားကစားပြိုင်ပွဲသို့အကောင်းဆုံးတတ်နိုင်သမျှနေရာနှင့်အာကာသတြန္းစွဲရသည်အဘယ်အရာကိုသူတို့လိုချင်တဲ့။, ဒါကြောင့်၊သင်ခံစားရလျှင်သင်ဒီလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်တစ်ဦးပွဲချင်းပြီးအတွက်သင်ဖို့ထွက်ဆွဲထားနှင့်ပယ်တွင်လူရှုပ်နှင့်အတူ၊သင့်အကောင့်ကိုဖန်တီးနှင့်အတူအလျင်တဆော–မမယ်တို့မှအနီးကပ်တင်ပြကြာ၊ဒါပေမယ့်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လျှင်၊သင်တို့သည်ထွက်ပျောက်ဆုံးနေဆဲနေတာပါအပေါ်အချို့သောကြီးမြတ်ညမ်း!